iMovie nkiri na Mac
Iji jide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe usoro a soro na-akwanyere ndị n'ozuzu arụmọrụ nke iMovie na ọ bụ-ahụ kwuru na ihe kasị mma mwekota na-chọrọ na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe usoro na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ozuzu mfe na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi n'ozuzu kacha mma n'ihi mgbe ọ na-abịa tụnyere iMovie na Mac a nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ okụt kpọmkwem ihe ọ bụ mgbe.
Mac na iMovie
Mac na iMovie dị ka njikọ chiri anya onye ọ bụla ọzọ dị ka arụmọrụ nke iMovie nwere ike na-enwe na ihe kasị mma ga n'ụzọ ozugbo usoro ihe omume e arụnyere n'elu Mac na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na ngwaahịa na-mepụtara Apple Inc na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro arụnyere n'elu Mac na e ibudatara na ukara saịtị iji jide n'aka na ihe ndị kasị emelitere na-adịbeghị anya ndị na-enwe mmasị na nke a. E nwere ọtụtụ online forums na blọọgụ na-enye Atụmatụ na nke a na maka otu ihe ụfọdụ na-nke ọma etinyere na ndị ọzọ na-adịghị etinyere na niile mere ndị na Atụmatụ na-adịghị emelitere na Itie oge na onye ọrụ na-agaghị enwe ike nweta ihe kasị mma na ọkaibe results na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na Atụmatụ na a ga-n'ihu ebe a na-juputara mụọ iji nweta ihe kasị mma nke ndị nkuzi na nke a.
5 Atụmatụ maka iMovie Theater
Iji mee ka n'aka na iMovie nkiri na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ ọ na-gwara iji jide n'aka na ọ Atụmatụ tinyere na nzọụkwụ na-soro na nke kacha mma n'ụzọ:
1. Olee na-ele gị iMovie Theatre mkpachị ọ bụla na ngwaọrụ
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta na-site na nke a na-arụpụta ihe kasị mma:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka banye na iCloud iji malite usoro na nke kacha mma n'ụzọ:
b. Site iMovie ụzọ na-a ga-agbaso bụ iMovie> mmasị na nlele igbe nke na-akpaghị aka bulite ọdịnaya gaa na iCloud bụ-enyocha n'ihu n'ihu:
c. Ozugbo nkiri na-uploaded iCloud onye ọrụ ahụ kwesịrị ka pịa òkè button wee họrọ nkiri:
d. The video ka mgbe ahụ e uploaded iCloud na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ọ na-ele ọ bụla na ngwaọrụ ọ chọrọ:
2. Olee izipu iMovie nkiri ka iDevice
Ọ dị mfe na enyemaka nke iOS ngwa nke na-abịa maka iMovie na maka otu ihe ahụ usoro a ga-soro na nke a bụ dị ka ndị a:
a. The iMovie ahụ bụ na-akọrọ nwere ike mere site ọkụkụ nkekọrịta bọtịnụ. The iMovie nkiri a ga-ahọrọ na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results:
b. Ozugbo aha nke nkiri e dere ya ga-akpaghị aka exported ka iMovie na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
c. Onye ọrụ ahụ nwere ike na-ekiri ndị Movie on iDevice na e uploaded iCloud n'ụzọ a na dị ka a n'ihi nke usoro n'elu. Ọ na-ekwubi usoro na zuru:
3. Olee otú ka ihichapụ a nkiri si iMovie nkiri na Mac
Usoro a ga-soro na nke a bụ jụụ dị mfe ma na onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji jide n'aka na needful a mere:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na clip a ga-ehichapụ ziri ezi clicked na site na menu na-egosi na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na Nhichapụ nhọrọ na-nyeere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ozugbo:
b. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ga-kpaliri jide n'aka na clip bụ ga-ehichapụ chọrọ nhọrọ bụ na-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
4. Importing ka iMovie nkiri
Usoro a bụkwa nnọọ mfe ma ndị na-esonụ na-ga-agbaso iji jide n'aka na ihe kasị mma n'ihi na site na nke a:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka-eso ụzọ File> Bubata
b. Ọhụrụ window na Pop elu ga-eji jide n'aka na ọ chọrọ video na-dị na ala na afọ ojuju na nke a kwa na-agwụ usoro na zuru:
5. agbakwụnye video mmetụta
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka ịnweta soja nke iMovie nkiri iji jide n'aka na usoro Ọganihu:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na n'okpuru clip nhọrọ ndị video mmetụta na-agbakwunyere jide n'aka na ọ na-agbakwunyere na video a na-egwuri ma ọ bụ onye ọrụ chọrọ iso na-. Ozugbo etinyere na zuru usoro ga-akwụsị ebe a:
Onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ndị kasị mma omume ndị na-enwe mmasị nke Filiks na e kwuru n'elu na-soro na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ngwaọrụ na-agbakwunyere n'ime iMovie na-eji iji jide n'aka na ihe ahụ bụ ndị kasị mma dị ka onye ọrụ chọrọ ka ha na-adị.
> Resource> iMovie> 5 Atụmatụ maka iMovie nkiri na Mac